Mid ka mid ah ciyaartoyda kooxda Chelsea oo Aabihiis afduub loo geystey (Sawiro) – SBC
Mid ka mid ah ciyaartoyda kooxda Chelsea oo Aabihiis afduub loo geystey (Sawiro)
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee kooxda Chelsea ee ka dhisan Galbeedka magaalada London ee cariga Ingiriiska John Mikel Obi ayaa Aabihiis afduub loogu geystey wadanka Nayjeeriya oo uu ka soo jeedo.
Afduubka Oday Obi ayaa la sheegay in uu ka dhacay Nayjeeriya maalinimadii Jimcada waxaase la sheegay in John uu maqlay afduubka Aabihiis isla maalinimadii waxaase dad badan ka yaabisay sababta John uu maalinimadii Axada isagoo Aabihiis afduuban yahay uu u go’aansadey in uu ciyaaro ciyaartii Chelsea & Stoke ku dhexmartey Britannia Stadium.
Warar laga helay qolka dhar badalashada Chelsea ayaa sheegaya in John Mikel uu ku adkeystey in uu ciyaaro ciyaarta inkastoo Aabihiis uu afduub ku sugan yahay, waxaana lagu macneeyey arintaasi isagoo doonayey in inaanu niyad jabin qoyskiisa & kooxdiis.
Agaasimaha dhanka Ciyaaraha ee kooxda Chelsea garoonka Mike Emenalo & tababaraha kooxdaasi Andre Villas-Boas ayaa sheegay in inkastoo John uu ku jiray xaalad jahwareer & walwal ku aadan afduubka Aabihiis hadana in uu u ciyaaray si aad u sareysa isla markaana niyad ahaan iyo maskax ahaan uu aad isku dajinayey.
Afduubka loo geystey ciyaaryahan John Mikel Obi Aabihiis ayaan aheyn kii ugu horeeyey ee loo geysto qoyskiisa mid ka mid ah ciyaartoyda ka ciyaara kooxaha Premiership-ka, bishii July sanadkii 2008-dii kooxo hubaysan aya isla wadanka Nayjeeriya gaar ahaan magaalada Port Harcourt waxay ku afduubeen ciyaaryahan Joseph Yobo oo kooxda Everton daafaca uga ciyaara walaalkiis ka weyn oo lagu magacaabo Nornu Yobo waxaana la siidaayey 10 maalmood oo uu afduub ku jirey, Lamana sheegin ilaa iyo haatan wax lacag madaxfurasho ah oo laga bixiyey siideynta Nornu Yobo.
Agoosto 27, 2011 at 6:37 pm
Siteenbar 15, 2011 at 10:46 am
Aad iyo aad ayaan uga xumahay afduubka lo geeystay aabihaa mike marka waxaa dhihilaa ahaa niyada ha iska xumeeynin hadaan nahay tageerayaashaa kooxda chelsea
Siteenbar 15, 2011 at 10:57 am
Kan dhahay it is ok sanbac waxaa feecan in abaa la afduub adiga waxaa ugaan laheed aabaha qiimaha oo yeelahay